Milestone-ka Cusub ee Hawada Hindiya: Laga bilaabo Safar 12-Saacadood ah ilaa 60 Daqiiqo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Milestone-ka Cusub ee Hawada Hindiya: Laga bilaabo Safar 12-Saacadood ah ilaa 60 Daqiiqo
Airlines • Airport • Aviation • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hawlgalladii ugu horreeyay ee duulimaad toos ah oo u dhexeeya Imphal (Manipur) iyo Shillong (Meghalaya) ayaa shalay lagu calaamadiyey RCS-UDAN (Qorshaha Iskuxirka Gobollada-Ude Desh Ka Aam Nagrik) ee Dowladda Hindiya.
Illaa iyo hadda, 361 waddooyin ayaa laga hawlgaliyay UDAN.
Hawlgalinta wadadani waxay fulinaysaa ujeeddooyinka Dawladda Hindiya si ay u samayso isku xirnaan cirka oo xoog leh meelaha mudnaanta u leh Waqooyi -bari Hindiya.
Masuuliyiinta Wasaaradda Duulista Hawada (MoCA) iyo Maamulka Madaarka Hindiya (AAI) ayaa goob joog ahaa intii la bilaabay hawlgalada duulimaadka.
Isku xirnaanta hawada ee u dhaxaysa magaalooyinka caasimadaha ah ee Manipur & Meghalaya ayaa ahayd mid ay muddo dheer sugayeen dadka gobolku.
Waxay caan ku tahay joogitaanka hay'ado waxbarasho oo aad u wanaagsan, Shillong waa xudunta waxbarashada dhammaan Waqooyi-bari Hindiya. Shillong sidoo kale wuxuu u dhaqmaa sida albaabka ilaa Meghalaya.
Maadaama aan la heli karin nooc kasta oo gaadiid toos ah, dadku waxay ku qasbanaadeen inay daboolaan safar dheer oo 12 saacadood ah oo waddo ah si ay u gaaraan Shillong oo ka timaadda Imphal ama waxay ahayd inay u duulaan Lokpriya Gopinath Bordoloi Airport International, Guwahati, ka dibna adeegga baska si ay u gaaraan Shillong. Dhammaystirka safarka oo dhan waxay qaadatay wax ka badan 1 maalin si loo gaaro Shillong laga bilaabo Imphal ama si kale. Hadda, dadka asaliga ah ayaa si fudud ugu duuli kara labada magaalo iyagoo dooranaya duulimaad kaliya 60 daqiiqo laga bilaabo Imphal ilaa Shillong iyo 75 daqiiqo Shillong ilaa Imphal.